amomamoğluအာဒိုဂန်သို့ပေးသောရုပ်သံလိုင်း၏ Istanbul Channel ၏ပေးစာကိုကြေငြာခဲ့သည် RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်amomamoğluရုပ်သံလိုင်း Istanbul Letter of Content ကိုErdoğanသို့ကြေငြာခဲ့သည်
Kanal Istanbul အတွက်ပြင်ဆင်ထားသည့် EIA အစီရင်ခံစာအပြီးတွင်İBBဥက္ကEk္ဌ Ekrem İmamoğluသည်ဥရောပဘေးထွက်အရံအဆောက်အအုံAreaရိယာ ၁ / ၁၀၀၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းပြောင်းလဲမှုအတွက်အယူခံဝင်ခဲ့သည်။
ကန့်ကွက်မှုမစတင်မီတွင် Imamoglu သည် phaeton မှစာနယ်ဇင်းသမားများ၏မေးခွန်းများအား cemevs ကိုဝတ်ပြုရာနေရာများအဖြစ်လက်ခံခြင်းဖြစ်စဉ်အားဖြေကြားခဲ့သည်။ အီမာမိုဂလူကသမ္မတအားအင်ကာရာရှိErdoğanသို့ ၄ မျက်နှာပါစာပါအချက်နှင့် ပါတ်သက်၍ သမ္မတအားမေးမြန်းခဲ့သည်။ IMM နှင့်ဗဟိုအစိုးရအကြားလမ်းကြောင်းများပြတ်တောက်စေလိုသည့်လူများရှိကြောင်းကျွန်ုပ်၏စာတွင်ရေးသားခဲ့သည်။ ၎င်းကိုပြင်ဆင်သင့်သည်။ သတင်းစာထဲမှာလူအချို့ရေးသားခဲ့သလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်သည် Kanal အကြောင်းစာမျက်နှာလေးမျက်နှာပါစာတွင်မပြောပါ။ ဒီအကြောင်းအရာကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ရှင်းပြချင်ပါတယ် ယင်းမြို့တော်၏ဦးခေါင်း, တူရကီရဲ့အမြင့်မားဆုံးအစဉ်အဆက်မဲအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်တူရကီသမ္မတနှင့်အတူဆွေးနွေးပွဲမြို့တော်ဝန်အဖြစ်အရေအတွက်ကရှေးခယျြထားသကဲ့သို့ငါအစ္စတန်ဘူလ်, ငါတို့ဟာအလွန်ဖော်ရွေဘာသာစကားအားဖြင့်သူတို့ကိုလွှဲပြောင်းရန်လိုခဲ့ပြီးပြီ, ငါရှင်းလင်း, အစ္စတန်ဘူလ်ယနေ့နှင့်မနက်ဖြန်ပေးချင်, မကျြနှာကိုမှဆွေးနွေးချက်မျက်နှာချင် ကျွန်ုပ်တောင်းဆိုချက်ကိုပို့သည် နောင်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်၊ သြတ္တပ္ပစိတ်နှင့်တရားမျှတမှုကိုမစ္စတာသမ္မတကလုံးဝပိုင်ဆိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အဖြေကိုအစ္စတန်ဘူလ်လူမျိုး၏နာမည်ဖြင့်သိချင်စိတ်နှင့်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးစောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်, အဖြေမရသေးပါ။
Kanal Istanbul အတွက်ပြင်ဆင်ထားသည့် EIA အစီရင်ခံစာအပြီးတွင် Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) ၏မြို့တော်ဝန် Ekrem amomamoğluကလည်း "ဥရောပဘေးထွက် Reserve Building Area 1 / 100.000 Scale Environmental Plan Change" အတွက်အယူခံဝင်ခဲ့သည်။ အယူခံဝင်ခြင်းမပြုမီ Imamoglu သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀ န်ကြီးဌာန၏Beşiktaşပြည်နယ်ညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန၏ရှေ့မှောက်၌အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထောက်များ၏မေးခွန်းများကိုဖြေကြားခဲ့သည်။ Imamoglu ကိုမေးသောမေးခွန်းများနှင့် IMM ဥက္ကPresident္ဌ၏အဖြေများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
“ မင်းအရင်ကအယူခံဝင်ခဲ့တယ်။ ထို့နောက်သင်သည် EIA အစီရင်ခံစာကိုကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ ကန့်ကွက်မှုများရှိသော်လည်းထိုအစီရင်ခံစာကိုပတ်ဝန်းကျင် ၀ န်ကြီးဌာနမှယနေ့အတည်ပြုခဲ့သည်။ ယခုသင်ဤတစ်ဖန်ပြန်လာပြီ ဒါကိုဘယ်လိုအကဲဖြတ်မလဲ။
သင်သိသည်မှာသောင်းနှင့်ချီသောလူများသည် EIA အစီရင်ခံစာအတွက်လျှောက်ထားခဲ့ကြသည်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး EIA ကိုလက်ခံဖို့ ၀ န်ကြီးဌာနကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ တကယ်တော့ဒါဟာငါတို့အတွက်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုတစ်ခဏချင်းစီလိုက်နာသွားမှာပါ။ ပထမဆုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အကြောင်းအရင်း၊ ငါဆိုင်းငံ့အစီအစဉ်များကိုကန့်ကွက်ပါလိမ့်မယ်။ စီမံကိန်း ၁၀၀၀၀၀ ကို ၀ န်ကြီးဌာနကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးအစ္စလာမ်ဘောင်နေထိုင်သူများကိုယ်စားအများပြည်သူသို့မျှဝေခြင်းမရှိဘဲ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ပါ ၀ င်မှု၊ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ထင်မြင်ချက်များကိုမယူပဲတရား ၀ င်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ စီမံကိန်း၏ ၁၀၀,၀၀၀ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကိုမြို့တော်၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ မြို့၏မပြောင်းလဲနိုင်သောစည်းမျဉ်းများဟုခေါ်သည်။ အမှိုက်များကိုအမြန်ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီလကုန်အထိဆိုင်းငံ့ခြင်းကာလရှိပြီးဒီနေ့ကိုငါကန့်ကွက်မယ်။ သူနာပြုဥပဒေ၏နယ်ပယ်အတွင်းကျွန်ုပ်ကန့်ကွက်ပါမည် အယူခံဝင်ပါမည် ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီမှာဖြစ်စဉ်ကိုအပြီးသတ်ကြဘူး။ EIA အစီရင်ခံစာတွင်လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်း၊ IMM၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများသည်တရားဥပဒေအရတရားရုံးကိုဖွင့်လှစ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ငါကိုယ်တိုင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးတခုဖွင့်ဖို့ငါ့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးချလိမ့်မယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းကအဲဒါကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာအသုံးပြုလိမ့်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဥပမာ, ဒီလအကုန်မှာအစ္စတန်ဘူလ်လူမျိုးအားလုံးကဒီအစီအစဉ်ကိုကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုဖို့စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံပါလိမ့်မယ်။ သူတို့သည်မြို့ပြစီမံကိန်း ၀ န်ကြီးဌာန၏ကိုယ်စားလှယ်များထံလည်းလာကြလိမ့်မည်။ ထို့နောက်အစီအစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်၊ ဆိုင်းငံ့မှုလုပ်ငန်းပြီးဆုံးပြီးနောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသောအခါ၊ ၎င်းသည်အနုတ်လက္ခဏာဆောင်ပါကတရားရုံးလုပ်ငန်းစဉ်ရှိသည်။ အစ္စတန်ဘူလ်၏အရေးပါသောပြဿနာဖြစ်သောငါ့ကိုရန်, လုံးဝအနာဂတ်အတွက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပါလိမ့်မည်ဖြစ်သော သာ. ကြီးမြတ်နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူဥပဒေရေးရာလမ်း, ၏အဆုံးတိုင်အောင်, အကြီးမားဆုံးသစ္စာဖောက် concept ကိုကျွန်တော် fit အစီအစဉ်, တူရကီ၏အယူအဆသစ္စာဖောက်ရာ (အစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပလိမ့်မည် မင်းထိုင်နေတာဘယ်သူလဲသိလား၊ ငါတို့သစ္စာဖောက်ပြီ 'လို့ဘယ်သူပြောတာလဲသိတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီသစ္စာဖောက်မှုကသူတို့ထက်ပိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ကြိုးစားသူများအားအမှားကြီးမှပြန်ပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားသည်။ ဤရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၎င်းတို့သည်ကန့်ကွက်မှုနှင့်ဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်အခွင့်အရေးများကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သန်းပေါင်းများစွာသောလူများကိုအဆုံးတိုင်အောင်ဆက်လက်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။
“ လမ်းညွှန်ကိုငါဆက်ရ ဦး မယ်”
“ EIA အစီရင်ခံစာကိုရာနဲ့ချီတဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်။ ”
သောင်းချီသောကန့်ကွက်မှုများ, ရာပေါင်းများစွာသောရှိခဲ့သည်။ ကျနော့်အမြင်မှာတော့သူတို့ဟာအလုပ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ကြတယ်လို့မထင်ပါဘူး။ သင်သွားချင်သည့်နေရာအကြောင်းဖြစ်သည်။ သငျသညျလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူတစ်နေရာရာကိုသွားချင်လျှင်, သင်ကလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အသံအပေါငျးတို့သနားထောငျ။ သင်၏အမြင်များသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်လုပ်ငန်းစဉ်၏အစ မှနေ၍ ကျွန်ုပ်သိသည်၊ သင်အလိုရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၎င်းသည်တီထွင်မှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီကိစ္စမှာဒီကန့်ကွက်မှုတွေကိုစွန့်လွှတ်ဖို့၊ ဆန်းစစ်ဖို့၊ မြင်ဖို့၊ အရာအားလုံးရှိနေပေမယ့်၊ ဒီနိုင်ငံရဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့ရှေ့နေတွေကဒီအန္တရာယ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတောင်မှဒုက္ခရောက်နေတဲ့တရားရေးစနစ်နဲ့တုန့်ပြန်မယ်၊ ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုဥပဒေအရအကာအကွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်။ EIA မှာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုငါစောင့်နေတယ်။ ငါအစီအစဉ်အတွက်သိပ်မျှော်လင့်မဟုတ်ပါဘူး; ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်ငါသောင်းချီကန့်ကွက်ရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်တွင်အစ္စတန်ဘူလ်မှစေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများသည်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေအရအမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများနှင့်လူငယ်များကိုသူတို့၏လျှောက်လွှာများကိုတင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုနောက်မှတရားဝင်ဖြစ်စဉ်ကိုအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ငါသဘောအရငါ့လမ်းညွှန်မှုကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကငါ့အတွက်ဖြောင့်မတ်တဲ့အစ္စတန်ဘူလ်ကပေးတဲ့တာဝန်နှင့်ညီမျှသည်။
phaetons နှင့်ပတ်သက်သော BBB အမှုမှထုတ်လွှတ်မည့်ပမာဏ၏အမြင့်ကိုလည်းပြောသည်။ ရထားနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်အခြေအနေကဘာလဲ? ဒီပိုက်ဆံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုကိုခင်ဗျားဘာပြောမလဲ။
အစ္စတန်ဘူလ်တွင်စုပြုံနေသောပြproblemsနာများစွာရှိသည်။ ဒါကသူတို့စုဆောင်းပြproblemsနာများတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရရင် phaeton ဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာမနေ့ကမှဒီနေ့အထိဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ Fayton သည်ကျွန်းများ၏အစဉ်အလာတွင်လည်းရှိသောယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီကိုမျဉ်းစို့။ ဒီအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လျစ်လျူမရှုပါ သို့သော်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာညံ့ဖျင်းစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့သည့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်မည်သည့်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏သြတ္တပ္ပစိတ်နှင့်မကိုက်ညီသောအဆင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်းများအတွက်အပျက်သဘောဆောင်သောခဲ့သည်။ လူတွေကိုနာတယ် ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့လပေါင်းများစွာကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရတယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်စေ့စပ်နားလည်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာ။ အများပြည်သူနေရာတွင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် 'pat' အဖြစ်လူမျိုး၏ရှေ့မှောက်၌ထားမရှိဘဲ, အစ္စတန်ဘူလ်တစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောအလွန်ကြီးမားသောပြissueနာကိုစောင့်ရှောက်ကျနော်တို့ကျွန်းများကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာသွားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏သက်ဆိုင်သူများနှင့်စကားပြော, အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုအပေါင်းတို့နှင့်လူမှုရေးဒိုင်းနမစ်ဖြေရှင်းရန်ဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်ပုံ။ ဒီမိုကရေစီနည်းစနစ်များကိုစုစည်းပြီးအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှုသည်အမှန်တကယ်သာဓကတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုနေ့၏အဆုံးမှာ; ငါတို့ရောက်ရှိသည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘက်စုံဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ရောက်ရှိလာသည့်အချိန်တွင်ပါလီမန်၌ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့သည်။ ရထားများမှာအတိတ်မှပစ္စုပ္ပန်အထိအခွင့်အရေးရှိသည်။ ဒီတော့ဒီကဒီမှာ phaetons စျေးကွက်တန်ဖိုးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစျေးကွက်တန်ဖိုးအရအလုပ်သမားများအနေဖြင့် ၀ င်ငွေရရှိသူများနှင့်သူတို့၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကိုကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုများအဖြစ်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကို Istanbul Metropolitan Municipality နှင့် IETT ကဲ့သို့သောသူများအားနှိပ်စက်ခြင်းမပြုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းသည်ရထားပိုင်ရှင်များအား TL 250 ပေးကမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်း၏ထင်မြင်ချက်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ညီလာခံကနိုင်ငံရေးပါတီအားလုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရရထားတစ်စီးလျှင် TL 300 ပေးရတာပိုကောင်းလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ဤလျှောက်လွှာကိုသွားမည်။ ငါတို့လည်းမြင်းဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိသည်။ သူတို့ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ၀ န်ကြီးဌာနနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းတွေ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယင်းတို့၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သောစိုက်ပျိုးရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏လက်ထဲတွင်ရှိသည်။ တကယ်တော့တိကျစွာမြင်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း, coachmen များ၏အခွင့်အရေးများပေးဆောင်နေကြသည်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်သစ်ကျွန်းများအဘို့အသင့်လျော်သည်, ငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းစေပါဘူး, ငါတို့သည်လည်းကွဲပြားခြားနားသောလျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များဒီဇိုင်းအသုံးပြုပုံဤကိစ်စတှငျယှဉ်ပြိုင်မှုပြင်ဆင်ပါ။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည် aksatam မှအကူးအပြောင်းကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်းများတွင်မည်သူမျှမထိခိုက်စေဘဲသူတို့ကိုမထိခိုက်စေဘဲရထားများကိုချစ်သောလူအုပ်ကြီးရှိသည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်သိသည်။ ဒါကအစဉ်အလာတစ်ခုလည်းငါသိတယ်။ ငါလည်းဒီခံစားချက်ကိုခံစားရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကဒီအဆင့်မှာငါတို့ကတိကဝတ်ပြုထားတာပါ။ ဒါကိုအများပြည်သူနှင့်မျှဝေကြရအောင်။
သမ္မတကြီးနှင့်တွေ့ဆုံရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ မင်းစာကိုပေးလိုက်တယ် အဖြေတစ်ခုရောက်လာပြီလား”
ငါချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့အလိုရှိ၏။ ကျွန်တော်တို့သမ္မတနဲ့အတူ Ankara မှာပထမဆုံးတွေ့ဆုံဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ပေမယ့်သူကမြို့ပြမြူနီစီပယ် ၃၀ နဲ့တွေ့ဆုံဖို့သူစီစဉ်ခဲ့တယ်။ ဤသည်မြူနီစီပယ်စည်ပင်သာယာသမဂ္ဂ၏အစည်းအဝေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ပထမတစ်ခုမှာကျိုးပဲ့နေသောဥက္ကchair္ဌတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဟာဘယ်လိုအစီအစဉ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာမသိရသေးဘဲ၊ ဒုတိယတစ်ခုမှာ၊ ငါတို့လိုဒီလိုမျိုးဖြစ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ စိတ်ပျက်စရာ သို့ရာတွင်၊ ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပျက်မယ့်အစားကျွန်တော့်အတွက်အသုံးအ ၀ င်ဆုံးအချက်ကတော့အဲဒီစာမျက်နှာလေးမျက်နှာပါစာကိုပေးဖို့ပါ။ ငါရေးတဲ့စာထဲမှာ IMM နဲ့ဗဟိုအစိုးရကြားကလမ်းကြောင်းတွေကိုဖောက်ဖျက်ချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်၊ ဒါကိုပြင်သင့်တယ်၊ ဒါကိုခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့ငါရေးခဲ့တယ်။ ငါအချို့ကိစ္စရပ်များအပေါ်ထိမိခဲ့တယ်။ သတင်းစာထဲမှာလူအချို့ရေးသားခဲ့သလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်သည် Kanal အကြောင်းစာမျက်နှာလေးမျက်နှာပါစာတွင်မပြောပါ။ ဒီအကြောင်းအရာကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ရှင်းပြချင်ပါတယ် ယင်းမြို့တော်၏ဦးခေါင်း, တူရကီရဲ့အမြင့်မားဆုံးအစဉ်အဆက်မဲအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်တူရကီသမ္မတနှင့်အတူဆွေးနွေးပွဲမြို့တော်ဝန်အဖြစ်အရေအတွက်ကရှေးခယျြထားသကဲ့သို့ငါအစ္စတန်ဘူလ်, ငါတို့ဟာအလွန်ဖော်ရွေဘာသာစကားအားဖြင့်သူတို့ကိုလွှဲပြောင်းရန်လိုခဲ့ပြီးပြီ, ငါရှင်းလင်း, အစ္စတန်ဘူလ်ယနေ့နှင့်မနက်ဖြန်ပေးချင်, မကျြနှာကိုမှဆွေးနွေးချက်မျက်နှာချင် ကျွန်ုပ်တောင်းဆိုချက်ကိုပို့သည် နောင်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်၊ သြတ္တပ္ပစိတ်နှင့်တရားမျှတမှုကိုမစ္စတာသမ္မတကလုံးဝပိုင်ဆိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အဖြေကိုအစ္စတန်ဘူလ်ပြည်သူကိုယ်စားကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးစောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်။ အဖြေမရသေးပါ။
သမ္မတအားသင်ပေးခဲ့သော Kanal Istanbul စာတွင်မည်သည့်ခေါင်းစဉ်များရှိသနည်း။
ကျနော့်အမြင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာသောဆက်ဆံရေးကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည့်အချက်များမှာအချို့သောနယ်ပယ်များ၌သမ္မတကလွဲမှားသောဖော်ပြချက်များဖြစ်သည်။ သငျသညျဥပမာတစ်ခုရှာဖွေလျှင်, "Imamoglu မက်ထရိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ငါတို့မှာရေပြproblemsနာမရှိဘူး။ ဒါမှမဟုတ် Kanal Istanbul နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရာစုနှစ်တစ်ခုအတွင်းမှာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမှမရှိခဲ့ဘူး။ ဤ ၀ န်ကြီးများမှပေးသောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးမှားသည်။ ငါပိုလေးသောအသုံးအနှုန်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ဤအရာအလုံးစုံမဖြစ်ပျက်ခြင်းနှင့်ထိုဆက်နွယ်မှုများမည်သို့လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်းဖော်ပြသည့်စာတစ်စောင်ဖြစ်သည်။ လိုင်းသည်စာဖြင့်ပြောရမည့်အရာမဟုတ်ပါ ဒါပေမယ့်ငါပြောခဲ့တာကငါအစ္စတန်ဘူလ်၏ပြtheနာများအားလုံးကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ရှင်းပြချင်တယ်။
သမ္မတအာဒိုဂန်က "ဒီစာထဲမှာပြောရင်မမှားပါဘူး၊ တခြားအရာတွေလည်းရှိသေးတယ်"
ငါပြီးသားကပြောသည်ငါပြီးသားကပြောသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, စာတစ်စောင်ပုဂ္ဂလိကဖြစ်ပါတယ်။ သူပြောတာမှန်ပါတယ် အထူးသီးသန့်အစည်းအဝေးဖြစ်သော Ekrem amomamoğluကိုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ရသည်။ Istanbul မြို့တော်စည်ပင်သာယာ၏မြို့တော်ဝန်။
“ ကာတာနိုင်ငံ၏စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏မိခင်အပါအ ၀ င်လူအများက Canal Istanbul လမ်းကြောင်းတွင်မြေများဝယ်ယူကြောင်းသတင်းများရရှိခဲ့သည်။ ယခုအခါသမ္မတအာဒိုဂန်က“ ကာတာ၏စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမိခင်” ကထိုမြေကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ သို့သော်အချို့သော CHP အဖွဲ့ဝင်များကထိုလမ်းကြောင်းမှမြေကွက်ဝယ်ယူသည်ဟုဆိုကြသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတအားမှန်ကန်စွာအကြောင်းကြားခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းမြောက်ပါသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝန်ကြီးကမြေယာလှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ သို့သော် CHP ပါတီအတွက်မဲပေးခဲ့သူ၊ AK ပါတီအတွက်မဲပေးခဲ့သူ၊ AK ပါတီနှင့်မည်သူနှင့် CHP နှင့်အတူပါ ၀ င်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ ကာတာသို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုကငါ့ကိုမဆိုင်ပါဘူး အဲဒီမှာဖန်တီးထားတဲ့ငှားရမ်းခကိုကြိုတင်ကြံစည်သူအဖြစ်ပြောင်းပြီးမည်သည့်နေရာတွင်ဝယ်ရမည်ကိုသိသည်။ ဘယ်သူပါတီလဲ၊ AK ပါတီဆိုတာဘယ်သူလဲ၊ CHP ကဘယ်သူလဲ။
“ စိတ် ၀ င်စားမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အတိုင်ပင်ခံတွေကဝတ်ပြုရာနေရာတစ်ခုလား”
“ မနေ့ကလွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချခဲ့တယ်။ Cemevi အတွက် ၀ တ်ပြုရာနေရာပေးရန် CHP အဖွဲ့၏တောင်းဆိုမှုသည်မသင့်လျော်ပါ။ Cemevleri ၏သန့်ရှင်းရေးနှင့်အလားတူ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအခမဲ့ရယူရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဗီတိုအာဏာသုံးမလား?
တစ်ကြိမ်ပြောခွင့်ပြုပါ ဦး ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာသည်ဖြစ်စေမသည်ဤပြissuesနာများသည် IMM ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်းလုပ်နိုင်သောအရာများဖြစ်သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်တွင်နေထိုင်သူများသည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာနှင့်တန်းတူညီမျှမှုကိုခံစားကြရသည်။ cemevis များကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာနေရာများဖြစ်သည့် Istanbul ဥပဒေတွင်ဖော်ပြထားသည်မှာမှန်ပါသည်၊ တနည်းအားဖြင့်ငါ IMB ကောင်စီဝင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခံစားစေချင်တယ်။ “ သခင်၊ ဘာဖြစ်လို့İmamoğluကဒီအသနားခံစာကိုမတင်ခဲ့တာလဲ” ဟုမေးသည်။ ညီလာခံကဒီလိုလုပ်ခွင့်ပြုပါ။ အကယ်၍ amo မိုမိုဂluက အကယ်၍ ၎င်းက 'ကြည့်ပါ၊ သူကအလုပ်မှာသုံးသည်။ သူကနိုင်ငံရေးအတွက်ကိရိယာများကိုလုပ်တယ်။ 'သူဘာကြောင့်မလုပ်ခဲ့တာလဲ။ ဤရွေ့ကားအလွန်ရယ်စရာအစီအစဉ်ဖန်တီး၏ကိစ္စများဖြစ်ကြသည်။ 'ဆရာ၊ ဘာသာရေးပညာရှင်တွေကနေရာတစ်ခုဟာ ၀ တ်ပြုရာနေရာဖြစ်မလားဆိုတာဆုံးဖြတ်တယ်' ဘယ်ဘာသာရေးသမားတွေလဲ။ အကျိုးစီးပွား၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘာသာရေးပညာရှင်များ? ဘယ်သူတွေကို? ထို့အပြင်ယုံကြည်ချက်ရှိသည့်ဘာသာရေးပညာရှင်တစ် ဦး သည်အခြားယုံကြည်ချက်တစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ရန်မည်မျှမှန်ကန်သနည်း။ ရာပေါင်းများစွာသော Alevi နိုင်ငံသားများလက်ခံခဲ့သောနေရာကိုအခြားသူတစ် ဦး ကမည်သို့ဆုံးဖြတ်မည်နည်း။ ဥပဒေကိုကိုးကားသူများသည်ဤဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတရား ၀ င်နယ်ပယ်အားလုံးတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် ငါအရမ်းဝမ်းနည်းတယ်, ငါဆွေးနွေးမှုများအတွက်အလွန်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ IYI Group မှဒုတိယဥက္ကPresident္ဌကအလွန်လှပသော Hadith အကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရောဖက်တစ်ပါးကိုယုံကြည်သူများဖြစ်ကြပြီး 'မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးသည်ကိုးကွယ်ရာနေရာဖြစ်သည်' ဟုဆိုခဲ့သည်။ ဒီလိုလုပ်နိုင်ပေမယ့်ဒီအခွင့်အရေးနှစ်ခုမရနိုင်တဲ့ပါတီနှစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်အရမ်းစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါဆက်ပြီးရုန်းကန်နေမှာပါ။
ဆောင်းပါး ၁၅ ခုတွင်သူသည် Kanal instanbul စီမံကိန်းကိုအဘယ်ကြောင့်ဆန့်ကျင်နေသည်ဟုamomamoğluကကြေငြာခဲ့သည်
Imamoglu သည် Kanal Istanbul စစ်တမ်းရလဒ်များကိုကြေငြာခဲ့သည်
GEFCO တူရကီ e-သင်ယူခြင်းပလက်ဖောင်းများ၏ content တိုးချဲ့နေသည်
amomamoğluသည်ပထမ ၆ လအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်မက်ထရိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုကြေငြာခဲ့သည်
သူ Kadir သတင်းစာအားပေးပြီးမှမြေအောက်ရထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကပြောသည်
နယူးBAŞKENTRAY Project မှ JCC မေလတွင်ပေးထားနုကိုပယ်ဖျက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်
12 လူတွေစိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ပေးထားဖြတ်ကူး level ဇော်မွှားပန်းကျန်ကြွင်းစေပြီ
တူရကီက Metro Tools များထောက်ပံ့ရေးစီမံကိန်း JCC ကိုပယ်ဖျက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ယခင်ကပေးထားသောဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်
Erdogan သို့ Imamoglu ပေးစာ၏အကြောင်းအရာ
Imamoglu ၏စာ၏ contents
ဥရောပဘေးထွက်အရံအဆောက်အ ဦ Areaရိယာ